कसरी आफैं टालियो ओजोनको प्वाल ? – जुगल टाईम्स
अन्तराष्ट्रिय बिज्ञान मौसम समाचार
कसरी आफैं टालियो ओजोनको प्वाल ?
Posted on २० बैशाख २०७७, शनिबार ०९:३४ Author जुगल टाईम्स	Comment(0)
वायुमण्डलको ओजन तहमा रहेको सबैभन्दा ठूलो प्वाल आफैं टालिएको छ । पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्र माथिको आकाशमा रहेको ओजन तहको प्वाल बन्द भएको हो ।
मार्चको अन्त्यतिर कोपर्निकस एटमस्फेयर मनिटरिंग सर्भिसका वैज्ञानिकहरुले उत्तरी गोलार्ध माथिको वायुमण्डलको ओजन तहमा अहिलेसम्मकै ठूलो प्वाल देखेका थिए । ओजन तहको उक्त प्वालको आकार लगभग ग्रिनल्याण्डको क्षेत्रफल जत्रै थियो ।
तर अप्रिल २३ मा एउटा सुखद खबर आयो । कोपर्निकस एटमस्फेयर मनिटरिंग सर्भिसले एक ट्वीट गर्दै आर्किटकको आकाशमा देखिएको ओजनको प्वाल बन्द भएको घोषणा गर्‍यो ।
उत्तरी ध्रुव माथिको आकाशमा देखिएको ओजनको विशाल प्वाल असामान्य मौसमको नतिजा भएको वैज्ञानिकहरुको ठहर छ ।
ध्रुवीय क्षेत्रको अत्यन्तै ठण्डा हावामा जब तीव्र गतिको हावा फस्दछ त्यसबाट सिर्जना हुने हुण्डरीले वायुमण्डलमा तीव्र दबाब पैदा गर्दछ । वैज्ञानिक भाषामा त्यसलाई पोलार भर्टेक्स भनिन्छ ।
उक्त हावाको दबाब यति तीव्र हुन्छ कि त्यसले समताप मण्डलको ओजन तहमा समेत प्वाल पारिदिन्छ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार उत्तरी ध्रुवमा देखिएको असामान्य मौसम सामान्यीकरण भएसँगै ओजन तहमा परेको प्वालसमेत आफैं टालिएको हो ।
उत्तरी ध्रुवको आकाशमा देखिएको ओजन प्वाल आफैं टालिनुमा कोरोना महामारीका कारण भैरहेको लकडाउनबाट प्रदूषण घट्नुसँग कुनै सम्बन्ध नभएको वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ । एजेन्सीको सहयोगमा
पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरूको छुट्टै बैठक, सन्देश लिएर वर्षमान पुन प्रचण्डकोमा
Posted on ८ बैशाख २०७७, सोमबार १६:२३ Author जुगल टाईम्स
प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएलगत्तै पूर्वमाओवादी खेमाका मन्त्रीहरूबीच छुट्टै छलफल भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, खानेपानी मन्त्री बिना मगर लगायत सहभागी थिए । छलफलले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा गरिएको निर्णय गम्भीर षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको […]
इंग्लिस प्रिमियर लिग : दर्शकविना तटस्थ मैदानमा खेलाउनु अन्तिम विकल्प